Vavaka mba ho feno ny Fanahy Masina | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka mba ho feno ny Fanahy Masina
Asan'ny Apostoly 1: 8:
8 Fa hahazo hery ianareo rehefa avy ny Fanahy Masina; ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany.
The Fanahy masina no loharanon'ny herin'Andriamanitra. The Fanahy masina dia ny Fanahin'Andriamanitra nirahina mba hamelona antsika hiaina toa an'i Kristy. Amin'ny maha kristiana, dia manompo an'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fanampian'ny Fanahy Masina isika. Androany isika dia handeha amin'ny vavaka mba ho feno ny fanahy masina. Alohan'ny hidirantsika amin'ireto vavaky ny fanahy masina ireto dia zava-dehibe ny hahalalantsika kely momba ny Fanahy Masina sy ny iraka ampanaovina antsika amin'ny maha-kristiana antsika. Mivavaka ho anao aho fa rehefa vita ny famakiana ity lahatsoratra ity sy ny fanaovana vavaka, dia ny afon'Andriamanitra izay entin'ny fanahy masina ihany, tsy hiala amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy.
Iza ny Fanahy Masina?
Jaona 14:16:16 Ary Izaho hivavaka amin'ny Ray, dia homeny Mpananatra hafa mba hitoetra eo aminareo mandrakizay;
Ny Fanahy Masina dia olona, ​​tsy rivotra, na afo na hery, Izy no olona fahatelo an'ny Andriamanitra. Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao amintsika. Rehefa saika handao ireo mpianany teto an-tany i Jesosy dia nampanantena Izy fa handefa mpampionona hafa ho azy ireo, io mpampionona io dia tsy ho eo amintsika fotsiny, fa ho ato amintsika Izy, Jao. 14:17. Ity mpampahery ity dia ny Fanahy Masina. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia mila ny fanampian'ny fanahy masina hahomby amin'ny fiainany Kristiana. Raha tsy misy ny fanahy masina, dia tsy afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny fomba mandaitra isika. Ny fanahy masina no mpanampy antsika, tsy afaka manampy ny tenantsika isika, ka izany no ilantsika fanampiana avy amin'ny fanahy masina. Andao jerena ny iraka nampanaovin'ny Fanahy Masina teo amin'ny fiainantsika.
Misionan'ny Fanahy Masina ao amin'ny fiainantsika
Ity ambany ity ny anjara asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika.
1. Mpanampy: Ny Fanahy Masina no mpanampy antsika. Ny Fanahin Andriamanitra no olona manampy antsika hanompo an'Andriamanitra amin'ny fomba mahomby, manampy antsika koa Izy amin'ny fiainam-bavaka. Rehefa manana ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainanao ianao dia tsy afaka ny hahazo fanampiana avy amin'Andriamanitra mihitsy.
2. Mpampionona: Mpampionona dia mpanentana, mpanandratra ny lohanao, fanahy masina, fa tsy famonoana mahafaty, tsy fanahy fitsarana, mampionona azy, mandrisika, tia sy tia. Raha manameloka ny feon'ny fieritreretanao ny devoly, ny fanahy masina dia mampionona anao hatrany. Rehefa feno ny fanahy masina ianao, dia tsy ho afaka hionona mihitsy.
3. mpiaro: Mpanolotsaina dia olona manohana anao ampahibemaso. Eo anilanao foana ny fanahy masina, tsy handao anao na hahafoy anao velively Izy. Ho eo aminao foana Izy. Rehefa manao zavatra tsy mety ianao amin'ny fanesorana, mihazakazaka mankany amin'ny fanahy masina, dia hainy ny miaro anao sy miaro anao amin'ny loza, dia hanome hery anao tsy hanao fahadisoana toy izany intsony.
4. mpanalalana: Ny fanahy masina no mpanelanelana antsika, Izy no nifona ho antsika. Ny mpanelanelana dia olona iray izay miditra amin'ny ananan'ny hafa, indrindra amin'ny vavaka. Fa ny fanahy masina dia mivavaka ho antsika araka ny Romana 8:26. Rehefa feno ny Fanahy Masina ianao, dia ho ao an-tsainao foana Andriamanitra satria amin'ny alàlan'ny Fanahiny no handao anao mandrakariva.
5. mpanolo-tsaina: Ny Fanahy Masina no mpanolotsaina antsika, izy no mpanolo-tsaina ambony antsika, Izy no mitarika antsika amin'ny raharahantsika. Nilaza i Jesosy fa hampianatra antsika ny zavatra rehetra ny Fanahy, Jaona 14:26. Mampianatra sy manome torohevitra antsika ny fanahy masina mba hahavita ny tanjontsika eo amin'ny fiainana. Ny Fanahy Masina dia mpanazatra amin'ny fotoanantsika.
6. hampahery: Manome hery antsika ny Fanahy Masina. Izy dia manamafy antsika amin'ny lafiny rehetra. Rehefa feno ny fanahy masina ianao, dia mety ho malemy foana. Handeha amin'ny hery masina foana ianao. Ary ny fanahy masina koa dia manatanjaka antsika ao anaty, amin'ny tenin'Andriamanitra izay mihaino isan'andro.
7. Miato: Ny Fanahy Masina no manatrika antsika, fa eo amintsika foana izy. Tsy handao antsika na hahafoy antsika mihitsy ny fanahy masina. Ho eo anilanao foana Izy. Tsy kivy ny fanahy masina, saingy indrisy fa maro amintsika no manaiky azy. Ny boky pirinty masina dia misy antsika hatrany hanampy antsika, hanoroana antsika, hampahery antsika, hanelanelana antsika sy ny maro hafa. Ny fananana fanahy masina dia tena sakaizantsika tokoa.
Ahoana no hamenoana ny Fanahy Masina.
Misy fepetra vitsivitsy tokony hatao mba ho feno ny Fanahy Masina, ireto manaraka ireto:
1. Miteraha-teraka indray. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny famonjena ianao ary teraka indray, dia tsindrio Eto
2. Manàna finoana. Minoa ny Fanahy Masina. Hebreo 11: 6
3. Mivavaha mba ho feno ny fanahy masina
Vavaka mba ho feno ny Fanahy Masina:
Eto ambany isika dia hijery vavaka sasany mba ho feno ny fanahy masina. Rehefa ampiarahinao amin'ireto vavaka ireto dia ento am-pinoana izy ireo ary handray batisa vaovao amin'ny afo jesosy.
1. Ray ô, misaotra anao noho ny famonjena nataoko tamin'ny anaran'i Jesôsy
2. Ray ô, misaotra anao aho noho ny herin'ny Fanahy Masina.
3. Ray ô, amin'ny ran'i Jesosy no manasa ahy ny fahotako rehetra ary ampaherezo ahy amin'ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ray ô, avelao ny Fanahy Masina hameno ahy taloha kelin'izay.
5. Ray ô, avelao ho tapaka ny faritra rehetra tsy tapaka amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Ray ô, ampio aho amin'ny afon'ny Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ny fanandevozana manohitra ny hery rehetra amin'ny fiainako, tapaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ry Tompo, avelao ny olon-kafa rehetra handositra ny fanahiko ary avelao ny Fanahy Masina hitantana, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Tompo ô, ampidiro amin'ny tampon-tendrombohitra ity ny fiainako ara-panahy.
10. Ray ô, avelao hisokatra ny lanitra ary aoka ny voninahitr'Andriamanitra hianjera amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Ray ô, avelao ny famantarana sy fahagagana ho ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Ny fifaliana rehetra ataon'ny mpampahory teo amin'ny fiainako dia mivadika ho alahelo, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ny matanjaka rehetra, izay miasa amiko, dia mararin'ny anaran'i Jesosy.
14. Tompo ô, sokafy ny masoko sy ny sofiko mba handraisana zavatra mahagaga avy aminao.
15. Tompo ô, omeo ahy ny fandresena amin'ny fakampanahy sy ny satana.
16. Ry Tompo, ampitahory ny fiainako ara-panahy ka tsy hijanona amin'ny jono aho amin'ny rano tsy mahasoa.
17. Tompo ô, afaho ny fiainako ny lelanao, ary may ny fahalotoana ara-panahy rehetra ato anatiko.
18. Ray ô, ataovy aho hanoanana sy hangetaheta ny fahamarinana, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Tompo ô, ampio aho ho vonona ny hanao ny asanao nefa tsy manantena fankasitrahana avy amin'ny hafa.
20. Tompo ô, omeo fandresena aho, amin'ny fanamafisana ny fahalemena sy ny fahotan'ireo olon-kafa, raha tsy miraharaha ny ahy manokana aho.
21. Tompo ô, sitrano ny faritra mihemotra amin'ny fiainako ara-panahy.
22. Tompo, ampio aho ho vonona ny hanompo ny hafa fa tsy te-hampiasa fahefana.
23. Tompo, ampio aho ho vonona ny hanompo ny hafa fa tsy te-hampiasa fahefana.
24. Tompo ô, sokafy ny saiko momba ny soratra masina
25. Tompo ô, ampio aho hiaina isan'andro, hahafantatra fa ho avy ny andro hitsaranao fiainana mangingina sy hevitra lalina.
26. Tompo ô, avelao aho ho vonona ny ho tanimanga eny an-tananao, vonona hovolavola araka ny irinao.
27. Tompo ô, atsangano amin'ny torimaso ara-panahy aho ary ampio aho hitafy ny fiarovan-jiro.
28. Tompo ô, omeo ahy ny fandresena amin'ny fahalavoana rehetra ary ampio aho ho afovoan'ny sitraponao.
29. Izaho dia manohitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako izay hahatonga ny hafa ho tafintohina, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Tompo ô, ampio aho hanaisotra ireo zaza tsy ampy taona ary hitafy fahamatorana.
31. Tompo ô, ampaherezo aho hitsangana mafy amin'ireo tetika sy teknika rehetra ataon'ny devoly.
32. Tompo ô, omeo hanina be aho amin'ny ronono madio sy ny ventin-kanina mahery amin'ny teninao.
33. Tompo ô, omeo hery aho hanalavirako ny zava-drehetra na iza na iza, izay mety hisolo toerana an'Andriamanitra ao am-poko.
34. Tompo ô, misaotra Anao aho noho ireo fijoroana ho vavolombelona izay ho avy eo.
35. Ambarako fa nantsoin 'Andriamanitra aho; tsy misy hery ratsy hanapotika ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Tompo ô, omeo ahy ny hery mahatoky ny antsoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Mahazo fanosorana aho mba hijanona ho maharitra, hanolo-tena ary haharitra amin'ny fiainako amin'ny fanompoana, amin'ny anaran'i Jesosy.
38. Nambaranako fa tsy ho voatarika amin'ny politika, fifaninanana na fikomiana, amin'ny anaran'i Jesosy aho.
39. Tompo ô, omeo ahy ny fahendrena hanajana ireo mpampianatra sy oloko izay nanofana ahy, tamin'ny anaran'i Jesosy.
40. Tompo ô, omeo ahy ny fon'ny Mpanomponao mba hahafahako miaina ny fitahianao isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy.
41. Izaho dia mahazo hery hitsangana miaraka amin'ny elatra toy ny voromahery, amin'ny anaran'i Jesosy.
42. Namoaka ny tsy haneren'ny fahavalo ny antsoko aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
43. Amin'ny herin'ilay Andriamanitra velona, ​​ny devoly dia tsy hitelina ny anjarako ho minisitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
44. Hery ho amin'ny fampandrosoana mahomby amin'ny antsoko, tongava amiko ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
45. Manambara ny ady amin'ny tsy fahalalana ara-panahy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
46. Mamatotra sy mandroaka ny fanahy tsy mety rehetra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
47. Izaho dia mahazo fanosorana hahomby amin'ny asa fanompoana, amin'ny anaran'i Jesosy.
48. Tsy ho fahavalon'ny fahamarinana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
49. Tsy hangalatra ny volan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
50. Tsy hanala baraka ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
51. Handeha amin'ny fahamasinana isan'andro aho amin'ny anaran'i Jesosy.
52. Hamatorako ny fanahin'ny tsy fahalotoana ara-nofo amin'ny anaran'i Jesosy.
53. Mahazo ny kolontsainan'ny tsy mivadika amin'ny ministerako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
54. Tsy ho mpanjaka antitra aho izay tsy mahatohitra torohevitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
55. Tsy ho miaina fiainana tsy misy havana intsony aho amin'ny anaran'i Jesosy.
56. Tsy hanompo ny Mpamonjiko mahafinaritra aho amin'ny fahazoana vola maloto, amin'ny anaran'i Jesosy.
57. Miaro ny fanahin'ny fifandirana sy ny fanoherana rehetra amin'ny vadiko / vadiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
58. Ny vadiko / ny vadiko tsy hamafy ny mambran'ny fiangonako, amin'ny anaran'i Jesosy.
59. I Jodasy rehetra teo amin'ny asa fanompoana nataoko, dia latsaka ao anatin'ny fandrika nataonao manokana, amin'ny anaran'i Jesosy.
60. Ny fanompoako dia tsy hanimba ny tokantranoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
61. Ny fanambadiako dia tsy hanimba ny ministerako, amin'ny anaran'i Jesosy.
62. Ny zanako dia tsy ho zana-tsipìka diso teo amin'ny fanompoako, amin'ny anaran'i Jesosy.
63. Izaho dia milaza ny fandrosoana sy ny fahombiazan'ny asa fanompoana ataoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
64. Ny fiangonako hahatsapa fanambinana, amin'ny anaran'i Jesosy.
65. Tompo ô, avelao ny fanompoako hahatratra ny tsy azo ampianarina, amin'ny anaran'i Jesosy.
66. Betsaka ny olona handeha any an-danitra noho ny fanompoako tamin'ny anaran'i Jesosy.
67. Mamono ny fanafihana rehetra ataoko amin'ny ministerako aho. Handresy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
68. Tsy hanaikitra ny rantsan-tànana nanome sakafo ahy tamin'ny anaran'i Jesosy aho.
69. Tsy hikomy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
70. Ny fahefana rehetra ato an-tranon'ny raiko, izay miasa manohitra ny fiantsoako dia maty amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, misaotra anao aho noho ny namalianao ahy an'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka Handresena ny sakana
Next lahatsoratraTorohevitra 40 Mba hofoanana ny nofinofy ratsy
Fahasoavana Beohtweh 3 Novambra 2019 Amin'ny 2:17 hariva
MOG Misaotra betsaka anao noho ireo vavaka sy fitaovana ara-panahy ity izay navoakanao teo amin'ny tranokala fa nahasoa ahy isan'andro io dia nampiasa ny fomba fanao amin'ny fifadian-kanina aho ary nanao ny fifadian-kanina amin'ny 7 andro izao ary anio no andro farany amin'ny ny fifadian-kanina izay nisaotako an'Andriamanitra, dia mivavaka aho hanome azy fahendrena bebe kokoa sy fahasoavana tsy manam-petra amin'ny anaran'i Jesosy 🙏. Azafady mba tsarovy aho amin'ny vavaka ur koa dia misaotra anao.
marisela C cueto 18 Jolay 2020 Amin'ny 2:57 maraina
Misaotra anao tamin'ny fampianaranao, mila ny herin'ny Fanahy Masina ho tonga amiko tahaka ny tamin'ny lasa. Mila hahery ny mivavaka ho an'ny zanako. Mila ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainany, ilainy ny mameno ny fony amin'ny fitiavana, mila famelan-keloka izy mba hahafahany mifaly sy hahatsapa fiadanana. Fantany fa tsy mivavaka ho azy isan'andro aho, fantatro fa afaka mangataka ny Fanahy Masina aho hamela azy sy hamela azy hamela azy ao am-pony. Mila matoky bebe kokoa aho ary mino amin'ny foko rehetra. Tsy mandà fa manana fahefana hamaha izany aho. Ao amin'i Jesosy ny anarana hoe Amen
Mical 21 martsa 2021 Amin'ny 10:51 hariva
Sambatra aho noho ireo fampianarana ireo misaotra anao lehilahin'Andriamanitra
Ahoana no fomba hivavahana mahomby amin'ny fahagagana
Vavaka Famelana hanafoana ny ozon'ny fianakaviana
Desambra 17, 2018